Resaky ny mpitsimpona akotry : jamba mitantana (NewsMada) | AEMW
Resaky ny mpitsimpona akotry : jamba mitantana (NewsMada)
Mandalo eto amin’ny nosy mitsidika handanjalanja ny fandehan-draharaha ilay olombe iraky ny SADC, andriamatoa Chissano. Tsy vahiny amin’ny maro ny anaran’io filoham-pirenena fahiny io. Tsaroan’ny betsaka fa izy no anisan’ireo mpampihavana nandritra ny krizy, nikaroka marimaritra iraisan’ireo olombe teto an-toerana izay samy kely fifandeferana ka nanasarotra sy nampitarazoka ny fiverenan’ny fanjakana tamin’ny laoniny. Raha mihoatra amin’ny fahita any ivelany dia niavaka Madagasikara. Nandritra ny dimy taona nilamina tsy nikorontana ny mponina. Ireo niseho raiamandreny anefa dia nifampitsapa hery tamin’ny ady saritaka, nampikatso ny firenena. Tranga nohararaotin’ny fikambanambe iraisam-pirenena nirotsahana tamin’ny raharahan-tokantranontsika.
Tsy ampy atao tsy ahamenatra anefa ny filaminan’ny vahoaka. Vao mainka nampibaribary ny tsy fahampiana fahendren’ ireo karazana antokotokon’olona nanolo-tena sy niseho ho raiamandreny mpitarika.
Mbola tsy nivadika ve ny pejin’ilay voalaza ho « ravin-dalana », ka tonga nitsapa ny halalin’ny rano ingahy Chissano ? Ny fitazan’ny vahoaka moa dia ny rafitry ny antokotokon’ny mpilalao pôlitika no navadibadika (maro ny mpamadika) fa ny fomba fitantanana tsy niova sy tsy nitondra fanavaozana teo amin’ny fizotran’ny andavan’andro. Nivoaka ny krizy angamba ny firenena fa ny maro amin’ny mponina dia manomboka « krizy ». Vontom-pahatezerana noho ny fiaretana fahasahiranana sy noho ny fahitana ny fitongilanan’ny fitsinjarana ny fahasarotam-piainana. Ao ny mitafy gony, anilany anefa, migalabona mampiadan-tena ny maro ao amin’ny fitondrana, tsy mandefitra no tsy menatra, jamba tsy mahita ny fahoriana manodidina azy, ny fahantrana nefa mandifotr’olona.
Tsy izany zava-madinika izany izay mikasika ny madinika no anton-draharaha anirahan’ny fikambanambe olona toy an’andriamatoa Chissano. Ny fototry ny diany dia ny fijerena ny fahafahan’ireo olombe iaraha-ihinana amin’ny fifampizarana adidy sy tombony mikasika ny fitantanany ny firenena. Asa izay fahitany ny zava-misy, ny fahenoany ny tranga moa dia mankadilo sofina, mifanipaka ny filazany ny andaniny sy ny ankilany. Angamba ny tatitra vokatry ny diany dia azo afohezina amin’ny filazana fa marimaritra ny mari-pana, mampiahiahy ny fiverenan’ny tazo.
← Reflet – Rio 2016 : les records du monde et les titres olympique (NewsMada)
Tangala : l’histoire coloniale revisitée (NewsMada) →